Zvinyorwa zvaRishi Dave pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Rishi Dave
Rishi Dave ndiye mukuru wekushambadzira mukuru we Dun & Bradstreet. Rishi akabatana neDun & Bradstreet munaFebruary 2014 kubva kuDell kwaaive director director wekushambadzira kwedigital. Rishi anobata madhigirii muinjiniya yemakemikari uye economics nerukudzo kubva kuStanford University uye MBA mukushambadzira kubva kuWharton School, University of Pennsylvania.
5 Matanho Ekukunda paAccount-Yakavakirwa Kushambadzira
Wednesday, April 5, 2017 Chipiri, August 1, 2017 Rishi Dave
Account-based marketing (ABM) iri kuwana nzvimbo pakati pevatengesi veB2B. Maererano neongororo ichangoburwa, 2017 B2B Programmatic Outlook, 73% yevatengesi veB2B parizvino vanoshandisa kana kuronga kutora ABM muna 2017. Uye ndezvechikonzero chakanaka: ABM's ROI inogona kukunda mamwe mabhizimusi ekushambadzira eB2B. ABM haisi zano idzva. Muchokwadi, vamwe vanopokana kuti ABM yanga iriko kwenguva yakareba sekushambadzira kwave nako. Iri zano rinobata account yega yega se